1-4mL Autosampler ndiro For HPLC, UPLC, GC
16mm, 25mm Test Tube For Water Analysis Cod, FTU
6-20mL GC HEADSPACE ndiro
8-60mL EPA Storage ndiro
Apex uye Delivery
rakaumbwa muna 2007
Zhejiang Aijiren Technology, Inc ari pose nokutengesa upenyu-sainzi, kemisitiri, rabhoritari consumables, etc. Our zvigadzirwa zvikuru marefu waivako mvura chromatography & gasi chromatography consumables akadai Chromatography Autosampler ndiro chete kuvharwa, inoisa, crimper uye sirinji filters, etc; Water kuongorora consumables akadai Cod bvunzo chubhu.
Zhejiang Aijiren Technology, Inc. vave unokupai kunyika dzinopfuura 70, rinotaura zvinopfuura 2000 vatengi rose. Vashandi 120, 100,000 kirasi rokutsvaira nzvimbo, ISO, GMP & Bureau Veritas certificated, ichi ndiwo sei tichengete yepamusoro uye kukwikwidzana mitengo kuti pose aikoshesa vatengi.
The zvebhizimisi tsika "Quality wokutanga, uye kupa akakwana." kukurudzira The Aijiren kufamba akaramba, uye batsirai The Aijiren kuti pamwe uye innovation.It ndiye basa redu wazvipira mairi kupa yepamusoro zvinhu uye basa zvakanaka vatengi vedu. "Akaramba dzichiri zvigadzirwa zvitsva kuti kugutsa zvinodiwa vanoshandisa" Chinangwa chedu chikuru. boka redu anoda kuongorora rakakura pawaitengesa China uye dzimwe nyika, uye kutsvaka zvakakurumbira chiitiko chitsva mumunda basa. 70 muzana zvigadzirwa vanotengeswa Europe uye United States gasket musika. Mumakore anopfuura gumi okukura uye kuita, kupanana uye vaidyidzana zhinji nesayenzi Michina madhipatimendi kumba uye kunze, tinobudirira dzakabudirira-siyana autosampler ndiro zvikuru kushandiswa murabhoritari uye ongororo indasitiri. Tinogona kupa zvakakukodzera rabhoritari consumables zvigadzirwa pamwe yepamusoro kune vatengi munyika yose, izvo zvinogona kukubatsira kukunda matambudziko pachine apo achiita kuedza murabhoritari.
kutenda uye basa Aijiren, uye nheyo pakukura kwedu.
Welcome kushanyira uye pamwe!